Laanta socodaalka Iswidhan oo qaxooti badan dib u celisey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Laanta socodaalka Iswidhan oo qaxooti badan dib u celisey
Laanta socdaalka Iswiidhan ee Migrationsverket-ka ayaa kor u qaaday dib u celinta qaxootiga magangelyo doonka u yimid dalkaan Iswiidhan.Sanadii lasoo dhafay ayaa dalkaan si qasb ah looga saarey tiro gaareeysa 2 200 oo rux, meesha ay qaxooti gaarahaya 8 500 oo qof ay si doorasha ah uga baxeen waa sida eey sheegtay Migrationsverket-ku. Guud ahaan tirada laga saarey dalkaan ayaa ah 10 700 oo ruux. Waxeeyna kor u kacday markii la barbar dhigo sanadkii kan ka horeeyay waa 2008-diiye in ka badan 1 300 oo ruux.
Tiradan sii badneeysa ayey ka gilgisheen ururada kaniisadaha oo iyagu aaminsan in aysan jirin qaxooti doortey ineey iskaga baxaan dalkaan Iswiidhan,aanna lasiinin doorasho maxad banaan dadyoowgaas magangelya-doonka ah, taas micneheedu waxaa weeye in waxii loo soo jeediyey ay aheed oo kaliya labo daran mid dooro:
Inaad ku noqoto go'aanka lagaagaaray iyo inuu booliisku ku jajuubo. Taas waxa yiri Kristina Hellqvist oo ka tirsan kaniisanda Iswiidhish-ka (Svenska kyrkan).
Wasiirka Hay'adda socdaalka (Migrationsverket-ka) Tobias Billström, ayaa aaminsan siyasadaha ah in qofka magangelya-doonka ah ay waajib ku tahay in uu iskaga baxo dalka markii diidmo lasiiyo. Hay'addiisana (migrationsverket) ay tahay hawl u taala sidii ay ku kaxeen lahayd dibna ugu celin laheeyd dadkaas dalkoodii.
Hay'adda Migrationsverket ayaa heshay dhaqaalo badan sanadkii ina soo dhaafey si ay u dardar galiso dib u celinta, tiradan sii badateyna waxeey farxad galisey wasiirka Hay'adda socdaalka (Migrationsverket-ka) Tobias Billström ayaa sanadii hore 2009 ugu magac dareyo sandii dibucelinta. Wuxuuna wasiirku hoosta ka xariiqay ineey diyaar u yihiin celinta cidii dacwadiisu soo gabagaboowdo lana siiyo dalka celin.
Dadyoowgaan qoxootidoonka u yimid dalkan Iswiidhan ee dib looga celinayo ayaa inta badan lagu qaadaa diyarado loo kireeyay ayna ku baxdo dhaqaal aad u farabadan. Taas ayeey ururada kaniisaduhu u arkaan mid aan habooneen.